Qhagamshela i-AutoCAD kunye neGoogle Earth-Geofumed
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Xhuma i-AutoCAD ngeGoogle Earth
AutoCAD-AutoDeskGoogle umhlaba / imephuezintsha
Umnqweno oqhelekileyo womsebenzisi we-AutoCAD kukudibanisa neGoogle Earth, ukukwazi ukusebenza kumfanekiso wokuba loo nto yokudlala, nangona ukuchaneka kwayo kungathandabuzeki, yonke imihla sifumana izinto ezingcono kwaye luncedo endaweni yokungabi nanto. Namhlanje siza kubona ubuncinci iindlela ezimbini zokuyenza:
A. Ngomyalelo we-ImportGEImage
Oku kukuphunyezwa koko into yokudlala yaselabhu, evela kwi-AutoCAD 2008 idibeneyo. Oku kufuna amanyathelo amathathu kuphela:
1. Seta iiyunithi. Kufuneka zibe kwiimitha, kufuneka nje ufake i-UNITS umyalelo, kwaye wenze uhlengahlengiso.
2. Yabela uqikelelo. Oku kufuneka kube kwi-lat/lon kunye ne-Datum WGS84. Ukuze wenze oku:
Imephu > Izixhobo > Yabela inkqubo yoLungelelaniso lwehlabathi
Emva koko sikhetha iLat Longs, LL84, ene-negative west.
2. Thatha ngaphandle umfanekiso. Sibhala umyalelo we-ImportGEImage kwaye yiloo nto. Ngelishwa, ikhona kuphela kwi-AutoCAD Civil 3D / Imephu kwaye ekubeni icela kuphela indawo ephakathi, iwela apho ikwazi khona, kwaye kufuneka uyilinganise, uyishukumise, uyijikeleze. Enye ingxaki yeyokuba iza kuphela ngokungwevu, njengesivumelwano phakathi kwezi nkampani zimbini. Ukuthumela umfanekiso ngasemva, cofa umda, cofa iqhosha lasekunene lemouse kwaye ukhethe "bonisa umyalelo > thumela ngasemva"
B. Ukusebenzisa izixhobo zePlex.earth.
Esi sixhobo sivela kwi-Plexscape, ethi kunye ne-XANADU ibonise isisombululo esinomdla sokudibanisa i-Google Earth kunye neenguqulelo ze-2007, i-2008, i-2009 kunye ne-AutoCAD 2010, zombini kwi-Civil3D, imephu, i-AutoCAD eqhelekileyo (oku kuhle kakhulu) kunye ne-Architecture. Inokufaniswa okuthile kwimisebenzi eyenziwayo ineMicrostation edibeneyo.
1. Faka izixhobo zePlex.Earth. Kukho oko yikhuphele kwiphepha yePlexscape, xa ufaka inguqulelo ye-AutoCAD ikhethiwe. Xa iqhutywe okokuqala, iphaneli iphakanyisiwe ukubhalisa inguqulo, kufuneka unikeze idilesi ye-imeyile kwaye uye kwi-akhawunti kunye nekhonkco abayithumela ngokukhawuleza. Akunandaba ukuba ifakwe kwiinguqu ezahlukeneyo ze-AutoCAD, isebenze kuphela kanye kunye nomyalelo we-PLEXEARTH imenyu iphakanyisiwe, xa kungenjalo xa uvula i-AutoCAD.
Kuyaqondwa ukuba i-dwg kufuneka ibe nentelekelelo eyabelweyo kunye neeyunithi zokusebenza zemetriki.
2. Yintoni eyenziwa yiPlex.Earth. Eyona nto ilungileyo ngayo kukuba unokusebenza kwi-UTM, ngaphandle kokutshintshela kulungelelwaniso lwejografi. Ummandla ukhethiwe kwaye emva koko ummandla kwiibhokisi ezisekhohlo. Bambalwa abatshayayo ukubamba ingqalelo yam ekuqaleni, emva kokuphawula ukuba kukho kwenye yeeposti zam, ndiye ndagqiba kwelokuba ndiyizame kwaye ndiye ndachukunyiswa kukusebenza kwayo. Ngoku mandikuxelele ukuba yenza ntoni:
Ngqamanisa imboniselo ye-AutoCAD neGoogle Earth. Oku kwenziwa nge icon yesibini, ukuyikhetha icela ibhokisi kwaye kwangoko ihambisa imboniselo yeGoogle Earth ide idityaniswe.
Beka amanqaku kuGoogle Earth. Oku kwenziwa nge icon yesithathu, ukuyivula kukuvumela ukuba ubeke amanqaku aya kwenziwa kuGoogle Earth. Uyakwazi ukwenza amanqaku AMANDLA kwaye ubanike inkcazelo ngokhetho lwe NAME. Kumzekelo, ndisebenzisa imephu yophuhliso olutsha, olusemfanekisweni weGoogle Earth useyintsimi yesundu yaseAfrika.
Fumana indawo esembindini kaGoogle Earth. Njalo kwiqhosha lesithathu, kwaye ubeke inqaku kwi-AutoCAD, kunye nendawo yefestile ene-Google Earth ebonisiwe.
Ngenisa umbono wangoku kuGoogle Earth. Oku kunophawu lokuqala, kwi Thatha ngaphandle imbonakalo yangoku, kwaye into oyenzayo kuGoogle Earth, khuphela a isikrini, fumana i ubukhulu nizise umfanekiso. Unomdla, ungcono kunesixhobo esele sinayo i-AutoCAD ngenxa yokuba iza ngemibala, enesisombululo esingcono kwaye ekubeni isebenzisa iingongoma ezintathu zokulawula (kungekhona enye efana ne-AutoCAD) iza njengoko iceliwe.
Khupha umfanekiso onethayile. Eyona nto ndiyibonileyo, yenziwa kwi icon yokuqala, ngokhetho "Yenza umfanekiso wemosaic", isasicela ukuba sichaze indawo, emva koko ichaze ukuba zingaphi iibhokisi ze-mosaic eziya kuba nazo kwaye iphaneli iphakanyisiwe apho unokukhetha khona ukuba umfanekiso ukhutshelwe ngombala okanye isikali esingwevu, unokukhetha ukukhuphela ngokuzenzekelayo kunye nomntu ngamnye, ukukwazi ukungabahoyi abo bangenamdla ngokhetho "zingadli".
Iqhosha lokugqibela kukuqwalasela imiba efana nale:
Umda woMfanekiso owongezelelweyo-Oku kuhle ukugcina ikhampasi kaGoogle Earth kunye ne-watermark ngaphandle kwebhokisi.
Ixesha lokuvala: ixesha elingakanani ukulinda ukubanjwa, kufuneka kwandiswe kwi-default kuxhomekeke kuhlobo loqhagamshelwano esinalo.
Ifomathi yomfanekiso: inokuba yi-jpg, png, bmp, gif kunye ne-tif
Umendo wemifanekiso: apho imifanekiso ekhutshelweyo iza kugcinwa khona, kukho inketho ukwenzela ukuba ibe kwindlela enye ye-dwg.
Inguqulo yesilingo isebenza ngokupheleleyo, iintsuku ezi-7 okanye umda wemifanekiso engama-40. Iifom zelayisensi zivela kwi-$ 23.80, kuxhomekeke kwixesha kunye nenani lemifanekiso, ukuya kwiinyanga ze-6 okanye iilayisenisi zonyaka omnye; kwakhona kule post ungabona i iindaba ze-2.
Apha unokukhuphela iPlex.Earth
… Yeyiphi inyanga…
USergio uMzukulwana uthi:
Sisebenzisa uMphathi weSpatial kwi-AutoCAD, idibanisa ngokugqibeleleyo ne-KML
Molo emva kwemini, ungandinceda ukuba ndikwazi ukongeza iplagi yePlex Earth kwimephu yam ye-autocad 3D 2014? enkosi enkosi
lucas sanchez uthi:
Ndiyingenisa njani imifanekiso kwiGoogle Earth ukuya kwiCivil 3D 2014???
Kungenxa yokuba inguqulo yakho ye-AutoCAD ilahlekile isalathisi semouse. Isonjululwe, ukuba uchonga ukuba isalathisi sibizwa ngantoni, emva koko uye kwiWindows kwaye ujonge iisimboli zekhesa, kwaye apho uthiya ngokutsha ikopi yesalathi esikhoyo kunye nesikubuzayo.
ufernando ruiz siller uthi:
Ndine-autocad civil 3d 2008 kwaye ayifuni ukungenisa imifanekiso kwi-google yomhlaba, ndifuna ukuyisebenzisa kwaye ayifuni ukundixelela ukuba yeyiphi isalathisi esingasebenziyo, yintoni isizathu soku, ndinawo umhlaba we-google pro yaqhekeka.
Ndingenza ntoni ukuze ndikwazi ukuthatha ngaphandle imifanekiso?
Umhlaba kaGoogle useWGS84
Inkxaso ilungile kakhulu ngemifanekiso, kodwa ingxaki endiyifumene ukuhanjiswa kwemifanekiso (iGoogle Earth) ikwi-UTM PSAD56.
Yeyiphi into eluncedo enokunceda ugqithiselo kwi-UTM WGS84… kwimeko yam
Ewe, ukuba usebenzisa i-AutoCAD kuphela ...
Ukuba usebenzisa i-AutoCAD Map 3d 2010 unawo onke amandla e-Arc Gis ngokuchanekileyo ukuba i-AutoCAD inikezela...
Akukho nto eyenzekayo ngemephu ye-autocad ye-georeferencing, ndikhetha i-ARC GIS okanye i-ENVI GIS, ekugqibeleni iMapinfo. Imephu ye-autocad isajolise kuyilo kwaye hayi kwiimephu, basenokuphucula kakhulu, akukho nto eyenzekayo.